Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Zara Rahman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2017 4:59 GMT
Ny ankamaroan'ny asako dia mifototra amin'ny fianarana sy ny asa momba ny fiovàna sosialy sy ny teknolojia – amin'ny fampiroboroboana ny lalàna mikasika ny fahazoam-baovao na ny fahalalahan'ny angodrakitra natao ho an'ny daholobe ; ny asa momba ny fahaizamanao eo amin'ny resaka angon-drakitra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ary eny amin'ireo mpanao gazety ; ary vao haingana toy ny mpikaroka manokana amin'ny resaka angon-drakitra tomponandraikitra sy ny toetra iombonany amin'ny fiovana ara-tsosialy. Raha atao amin'nyteny roa, mahaliana ahy ny fifanenan'ireo fotodrafitrasam-pahefana, teknolojia ary ny filazambaovao
Tamin'ny taona lasa teo, nandray anjara tamin'ilay atrikasa tsara be Global Voices Exchange aho, izay tena nianarako zavatra betsaka, ary nanomboka tamin'izay, ireo resaka nifanaovako tany dia mitantana ny asako ankehitriny. Miaraka amin'ireo torohevitr'i Georgia, nanoratra andrana manokana vitsivitsy koa tao amin'ny The Bridge. Hatramin'ny naha mpikambana ahy, nanana fahalalahana hahafantatra GVers maro avy amina firenena maro samihafa aho, ary tiako ilay rohy tonga dia mampifandray avy hatrany vantany vao mihaona mivantana amina namana GV.
Manaraka ny hetsika NewsFrames hatramin'ny niforonany aho, ary efa nampiantrano atrikasa ho an'i Connia tamin'ny vao fiandohan'ilay tetikasa mba hanampiana amin'ny fieritreretana mikasika ny mety ho fivoarany. Mihevitra aho fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny GV ao anatin'ny fiarahamiasa amina hetsika haino aman-jery hafa tsy manana karazana fiarahamonina maro toa isika.
Ao amin'ny fiainako arak'asa, ny ankamaroan'ny fotoanako dia laniako amin'ny fieritreretana momba ny fampahalalana, ny fahefana sy ny fifampitokiana -sy ny fiantraikan'ireo eo amin'ny fiarahamonina. Ao an-tsaiko, mitana anjara asa tena tsy manam-paharoa ny GV amin'ny fihaonan-dàlana amin'ireo hafa izay tsy inona fa ho lasa sarobidy kokoa. Toy ny nosoratako tamin'ny volana Desambra lasa teo, resy lahatra aho fa ankoatra ny fanavaozana, mila fiarahamonina azo atokisana toy ny GV ihany koa ny fanaovana gazety. Niresaka ny hery maro navoitran'ny GV tato anatiko aho tao anatin'izany, ary ny antony hinoako fa tena ilaina anio sy ho mandrakizay ny GV.
Raha toa ka te hanohy ny firesahana ny mikasika izay rehetra voalaza teo ianao, mifandraisa amiko ! Ao amin'ny Twitter aho @zararah, na andefaso imailaka !